၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမယ်ဆိုရင် ဘုရားငါးဆူ တပြိုင်တည်း ပွင့်မည်။ (အပိုင်း ၂)
ရွှေပြည်စိုး(1 November 15) ﻿
(အပိုင်း ၁)မှာ - - ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းကြောင်း၊
စစ်အုပ်စုနဲ့ ဘုံရည်ရွယ်ချက် သုံးချက်၊
ရွေးကောက်ပွဲ စည်းမျဉ်း (အချို့)၊
သမ္မတ၊ ကာချုပ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တို့ ပေးတဲ့ ကတိ၊
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် “ရွေးကောက်ပွဲ ခြေရာခံ” အဖွဲ့က ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ မဲမသမာမှု ၄၅၀ ခန့် … စသည်တို့ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခု (အပိုင်း-၂)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြပါမယ် … ။
ပြီးခဲ့တဲ့ (အပိ်ုင်း-၁)က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစပိုင်းကို (အပိုင်း-၁)အနေနဲ့ ဖော်ပြပြီးပါပြီ။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အစိုးရ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် … စသူတို့ရဲ့ ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်မယ့် ကဏ္ဍတွေကို အပိုင်းလိုက် ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမယ်။
(က) ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းဖို့ တောင်းဆိုကြပြီ။
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဟာ သူ့စစ်အုပ်စု ရာထူး အာဏာ တည်မြဲ ခိုင်ခန့်ရေးအတွက် ကြိုတင်/နောက်တင် မဲခိုးမှု အပါအဝင် မဲမသမာမှုပေါင်း များစွာ အတွေ့အကြုံ ရှိပြီး ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အနိုင်ရအောင် ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်တဲ့ နည်းတွေ ရရှိထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ခု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲလို ခါးသီးစရာ မဖြစ်စေရဘူး၊ ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုး၊ မဲမသမာမှုတွေ၊ ကြိုတင်မဲ ပြဿနာတွေကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မကြုံရအောင် ကြိုးစား သွားမယ်”လို့ ကတိတွေ ပေးကြပေမယ့် သူတို့ လုပ်ရပ်ကို သိနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်း တွေက မယုံကြည်ကြတော့ဘူး၊ အကြောင်းက “ခြံတခါခုန်ဖူးတဲ့ နွားလို လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ တွေမှာလည်း အရင်ကလို လိမ်ညာ လှည့်စား လက်တလုံးခြား လုပ်သွားမှာပဲ”ဆိုတာ သိထားကြလို့ပါ။ သူတို့က ဘုံရည်ရွယ်ချက် သုံးချက်က လွဲရင် ဘာမှ စဉ်းစားမှာမဟုတ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် ပြောပြော မရှက်ကြဘူး။ မရှက်တာမှ ကလေး၊ အရူးအအ၊ သူတောင်းစားတွေထက် ပိုဆိုး၊ ပိုမျက်နှာ ပြောင်သေးတယ်။ ကလေး၊ အရူးအအ၊ သူတောင်းစားတွေက စစ်အုပ်စုလို လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မရှိ။ မက်သုံးမက် ငန်းငန်းတက်ဖို့ဆို ပိုဝေးသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ကတိစကားတွေကို မယုံကြတော့ပဲ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အသစ်ကိုသာ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်ပေးဖို့ တောင်ဆိုကြတာ ဖြစ် တယ်။
(ခ) ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို မယုံကြည်သူနဲ့ အသစ်ပြန်ဖွဲ့လိုသူများ။
ဦးတင်အေး ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အစား အသစ်ပြန် ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ တောင်းဆိုသူတွေဟာ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့ လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ရေး ကွန်ရက်တို့ သာမက ၎င်းတို့ မတိုင်မီ ၂၀၁၄ ကတည်းက တောင်းဆိုသူများ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ -
(၁) ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ရေး ကွန်ရက်။
ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမီတက် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်နဲ့ လက်ရှိ ဦးတင်အေး ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်တို့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ သမ္မတထံ တောင်းဆိုကြောင်း သိရတယ်။ ၎င်းတို့က “ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တရားမျှတပြီး သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့၊ ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းသူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းမှ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမျှတမယ်၊ လွတ်လပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း” “ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် (၁) နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၉၈၊ အပိုဒ် (ခ)နှင့်မညီ၊ (၂) ပြည်သူ့လွတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ် ၅ နဲ့လည်း မညီကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တောင်းဆိုရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း” ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင် ရေး ကွန်ရက် ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးကြည်ဝင်းက ပြောကြားသွား ပါတယ်။ (RFA April - 5-2015)
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို မယုံကြည်လို့ အသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းဖို့ တောင်းဆိုမှုကို ဥပဒေ ပညာ ရှင်တွေနဲ့ ဦးကြည်ဝင်းတို့ မတိုင်မီ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ -
(၂) နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်များက ဦးတင်အေးကို မယုံကြည်ကြ။
နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောကြားတာက - ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင် အေးက “လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်လို့ ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုနေပေ မယ့် သူ့စကားနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် သူ့စကားပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့နေကြောင်း” ပြောဆိုကြပါ တယ်။ (မြန်မာတိုင်းမ်၊ ၂၁-၅-၂၀၁၄)။
(၃) သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ။
သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာစိုင်းစောလှက သျှမ်းမြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနဲ့ အဖွဲ့ဝင် အားလုံးကို အယုံအကြည် မရှိ၍ ယင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပေးရန် သျှမ်းမြောက်ပိုင်း မူစယ်ခရိုင် ရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ စာရေး တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို မယုံကြည်ဘဲ အသစ်ပြန်ဖွဲ့ဖို့ တောင်း ဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ကြည့်ရင် - “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက နမ့်ခမ်းမြို့ အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒ နယ်မှာ ဆရာစိုင်းစောလှက အနိုင်ရရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲရလဒ် ထွက်လာတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီက ဦးကျော်မြင့် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကို ကျနော်တို့က ပုံစံ ၁၆ နဲ့ စစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်။ တစုံတရာ ဖြေရှင်းပေးတာ မရှိဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိ်ုယ်တိုင် တာဝန်ယူပေးတာ မရှိဘဲ ခရီးထွက်သွားတယ်။ သူက နမ့်ခမ်း ဒေသခံ မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့က ဒေသခံကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး ကျနော်တို့ မြို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သစ်ဖွဲ့စည်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်”ဟု ကျားဖြူပါတီ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းထွန်းလှက ပြောတာ သိရပါတယ်။ (သျှမ်းသံတော်ဆင့်၊ ၁၈-၇-၂၀၁၄)။
(၄) ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း။
ညီနောင် တိုင်းရင်းသား ပါတီများ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစောသန်းမြင့်က ဇူလိုင် ၁၈ ရပက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ (၁၉)ကြိမ်မြောက် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားများပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း ပုံမှန် စည်းဝေးပွဲအပြီး သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးမြန်းချက်ကို “သမ္မတ ခန့်အပ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အား အယုံအကြည် မရှိကြောင်း” အစချီပြီး ပြောကြားပြီးနောက် ဆက်လက် ပြောကြားရာ မှာ - “ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို အယုံအကြည် မရှိဘူး၊ လုံးဝ ယုံကြည်မှု မရှိဘူး၊ ရာခိုင်နှုန်း ၁၀ဝ ကို ယုံကြည်မှု မရှိဘူး။ ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်မှု ရှိအောင် ယုံကြည်လေးစားလောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ၊ တိုင်းရင်းသားဘက်က ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်း ပါဝင်စေချင်တယ်၊ အမှန် ပြောရရင် တဖက်သတ် ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ကော်မရှင် ဖြစ်ကြောင်း” “သမ္မတ ခန့်အပ်ထားသော ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် တိုင်းရင်း သားများဘက်မှ သမာသမတ်ကျသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်မျှ မပါကြောင်း၊ အထက်မှ အောက်ခြေ အထိ ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း၊” “ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သည် ပြည်သူများက ထောက်ခံသည့် ကော်မရှင် ဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ ၎င်းကော်မရှင်အား သမ္မတက တိုက်ရိုက် ခန့်ထားသည်ဖြစ်၍ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပေးရန် သမ္မတတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း” ဦးစောသန်းမြင့်က ပြောကြောင်း သိရပါတယ်။ (Eleven Daily News. 19-7-2015)
(၅) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အစိုးရနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ။
အစိုးရရဲ့ အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီ NLD ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအပေါ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများကိုလည်း ကြည့်ပါ -
- ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားရာမှာ - “မြန်မာနိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ ကြား မနေဆုံး ကော်မရှင် ဖြစ်တယ်”လို့ နီပေါနိုင်ငံ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည် မထွက်ခွါမီ ခတ္တမန္ဒူမြို့မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ (RFA, 16-6-2015)။
- ရိုက်တာ သတင်းဌာနနဲ့ ဧပြီလ - ၃ ရက်နေ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားရာမှာ - “ဦးသိန်းစိန် တကယ်ပဲ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရိုးသားမယ် ဆိုရင် လက်ရှိ အခြေအနေထက် ရှေ့ကို အများကြီး ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း”၊ “ဆွေးနွေး ညှိနိုင်တာ၊ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်တာနဲ့ လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို အလေးအနက် မထားဘူးဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ သဘောထား တင်းမာ တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ကြောင်း”၊ “NLD အပေါ်မှာ ခွဲခြား ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဟာ လွတ်လပ်မျှတမယ်လို့ မထင်ကြောင်း”၊ “နိုဝင်ဘာ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အရေးပါပုံကို ဖိအားပေး ပြောဆိုခဲ့ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရောက်နေတာ ဟုတ် မဟုတ် စမ်းသပ်မှု တခုဖြစ်ကြောင်း” ဝေဖန်ပြောကြားထားပါတယ်။ (ဒီဗွီဘီ၊ ၄-ဧပြီလ-၂၀၁၅)။
အထက်ပါ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောတာတွေဟာ အမှန်တွေချည်းပါပဲ။ သမ္မတ ဦးဆောင်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲတွေနဲ့ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ အရာရှိ အရာခံ အားလုံးနီးနီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အားလုံး နီးပါးနဲ့ လွှတ်တော်သုံးရပ်ရှိ အမတ်အားလုံးနီးပါးဟာ စစ်တပ်က ဝင်လာတဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေနဲ့ အရပ်သား ဟန်ဆောင် စစ်ဗိုလ်တွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ အာဏာရ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အနိုင်ရ ရေးကိုပဲ လုပ်ကြတော့မှာပေါ့၊ သူတို့ပါတီ အနိုင်ရမှ သူတို့ ချယ်လှယ်ချင်သလို ချယ်လှယ်လို့ ရမှာကိုး၊ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ပါတီ မနိုင် နိုင်အောင် လုပ်နေကြတာပေါ့။
ပြည်သူလူထုက ဒီစစ်အုပ်စုကို မနှစ်မြို့မှန်း၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ပါတီ ရှုံးမယ်မှန်း သိနေလို့ ခုထဲက စပြီး ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်တဲ့၊ ယုတ်မာတဲ့၊ မသမာတဲ့ နည်းပေါင်းစုံတွေကို သုံးနေကြပြီ ဆိုတာ နေ့စဉ် ကြားသိ မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ သူတို့ပြောတဲ့ “ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ စေရမယ်”ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ အရူးပြော-အရူးယုံ၊ ခွေးပြော-ခွေးယုံ စကားတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ခုပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် ၂ လအတွင်း လက်တွေ့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက် ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်မယ်ဆိုတာကို!!
(၆) ခုနောက်ဆုံး တွေ့ရှိချက်မှာ - အစိုးရ၊ သမ္မတ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် … စသူတို့အပေါ် ပြည်သူလူထုက
မယုံကြည်ဘူးဆိုတာကို မြန်မာအာရှဘာရိုမီတာ စစ်တမ်းက သက်သေပြနေပါတယ်။
၂၀၁၅-၈-၂၄ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် ၂၀၁၅ မြန်မာအာရှဘာရိုမီတာ စစ်တမ်း((Myanmar Asian Barometer Survey)မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အပေါ် မြန်မာပြည်သူ လူထုက ၃၀%သာ ယုံကြည်မှုရှိပြီး၊ အစိုးရအပေါ် ၃၉%၊ သမ္မတအပေါ် ၄၀%သာ ယုံကြည်မှုရှိတယ် လို့ အဆိုပါ စစ်တမ်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ (DVB, Daily Eleven, 8-26-2015)
ပေါ်လွင်လာပြီး မရိုးသားတဲ့ သမ္မတ စိတ်ဓာတ်။
နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေ--က သမ္မတက မရိုးသားဘူး၊ လူထုဆန္ဒကို အလေးအနက် မထားဘူး၊ အစိုးရဟာ သဘောထား တင်းမာတယ်။ သမ္မတက ခန့်ထားတဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဟာ ကြား မနေဘူး၊ လွတ်လပ်မျှတမှု မရှိဘူး၊ ကော်မရှင်၊ ကော်မတီဝင်တွေဟာ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာ မရှိဘူး၊ ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ မကင်းရှင်းဘူး။ သမ္မတ ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ မညီလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ကော်မတီတွေကို ပညာရှင်တွေ၊ ပါမောက္ခတွေ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ သိက္ခာရှိသူတွေ၊ ပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းရှင်းသူတွေနဲ့ အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းဖို့ တောင်းဆိုနေချိန်မှာ သမ္မတက ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို ဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သူ့သြဇာ လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်အမတ် (၈)ဦးကို ဧပြီလ-၆ ရက်နေ့ မှာ ထပ်ခန့်လိုက်ပါတယ်၊ (ဧရာဝတီ၊ ၇-ဧပြီလ-၂၀၁၅)။
၂၀၁၁-မတ်လ-၃၀ ရက်နေ့မှာ သူက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၇)ဦးဖြင့် ပြည် ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အားလုံးဟာ စစ်တပ်က အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ပညာရှင်တွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ တဦးမှ မပါဘူး။ အခု ထပ်ခန့်သူတွေဟာလည်း ဘယ်ပြည်နယ်က ဘယ်သူတွေရယ်လို့ သဲသဲကွဲကွဲ ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရပါ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ မရိုးသားမှုကို ဖော်ပြရာရောက်နေပါတယ်။
ပေါ်လာပြန်ပြီ မရိုးသားသူ နောက်တယောက်။
သူကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးပါ၊ သူက ဇွန်လ-၈ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ(MPC)မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြောတာက ရှေ့နောက် မညီတဲ့ စကားတွေပါ။ သူက “၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရွေးကောက်ပွဲ အသုံးစရိတ်ဟာ ကျပ်(၁၀)ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကျပ်(၄၀)ဘီလီယံ သုံးစွဲဖို့ လျာထားထားကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး ဝန်ထမ်းများအား အစိုးရနှင့် ကုလ သမဂ္ဂက တရက် ကျပ်ရှစ်ထောင်ပေးကြောင်း”၊ “နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ဝင်အချို့က တံဆိပ်တုံအတွက် မင်တွေ၊ မဲပုံများပိတ်ဖို့ လုံခြုံရေး ကြိုးတွေ၊ လျှပ်စစ်မီး မရှိတဲ့ ဒေသများတွင် သုံးရန် အင်ဂျင်များ၊ ဆိုလာပြားများနှင့် မဲစာရင်း ပြုစုရာတွင် သုံးမည့် ကွန်ပျူတာများ လှူဒါန်းကြောင်း”၊ “ရွေးကောက် ပွဲတွင် သုံးမည့် ဘတ်ဂျက်ငွေကို နိုင်ငံတကာက ကူညီပါဝင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း” အပြင် “၂၀၁၅ ရွေး ကောက်ပွဲအတွက် မဲစာရင်းပြုစုရာတွင် လိုအပ်ချက်အချို့နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု အားနည်းခြင်းမှာ အသုံးပြုမည့် ဘတ်ဂျက်ငွေနှင့် ဝန်ထမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း” ထည့် ပြောသွားပါတယ်။ (မဇ္ဈိမ၊ ၉-ဇွန်လ-၂၀၁၅)။
ဘတ်ဂျက် နည်းတယ်ဆိုရအောင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျပ်(၁၀)ဘီလီယံနဲ့ လုပ်ခဲ့ပြီး ပြီ၊ ၂၀၁၅ မှာ ကျပ်ဘီလီယံ(၃၀)တောင် ပိုရထားတာတောင် နည်းတယ်ဆိုတော့ အားမနာတမ်း ပြောရရင် - ဘာကြောင့် ဒီလောက် များများခိုးချင်ရတာလဲလို့ ပြောရင် မကောင်းဘူးနော်။
တဖန်-တချို့ နိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲမှာ သုံးဖို့ မင်တွေ၊ လုံခြုံရေးကြိုးတွေ၊ မီးအင်ဂျင်စက်တွေ၊ ဆိုလာပြားတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ လှူဒါန်းတာ တော်လောက်ပြီပေါ့၊ ဘာလို့ သူများရှာထားတဲ့ ငွေကို အလကား လိုချင်ရတာလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲဟာ နိုင်ငံတော် အစိုးရကိစ္စပါ။ နိုင်ငံတော် အစိုးရကလည်း မနှစ်ကထက် ဘီလီယံ(၃၀) ပိုချထားပေးပြီးပြီပဲ၊ ဘာကြောင့် သူများဒေါ်လာတွေကို ထပ်လိုချင်ရ သေးတာလဲ၊ ဒေါ်လာခိုးချင်တဲ့ စိတ်ကို မျိုသိပ်လို့ မရတော့ဘဲ ပွင့်ထွက်လာတယ်လို့ ပြောရင် လွန်မယ် မထင်ဘူး၊ ဦးတင်အေးတို့လို အကျင့်ပျက်သူတွေအကြောင်း သိလို့ နိုင်ငံခြားအလှူရှင်တွေက ဒေါ်လာ ငွေ မပေးတော့ဘဲ အသုံးပစ္စည်းတွေကိုသာ ပေးတယ်ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းတယ်၊ ခင်ဗျားအစား ရှက်မိပါတယ်။
ခုတောင်မှ မီးစက်တွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေ၊ မင်တွေ ဘယ်လောက် ဘုန်းထားပြီးပြီလဲ မသိဘူး၊ ပြောလေ၊ ပြောစရာတွေ ထွက်ထွက်လာလေပဲ၊ ခင်ဗျားတို့အကြောင်း ပြောရင် ပြီးမှာ မဟုတ်တော့ ဘူး။
မပြောမဖြစ်လို့ ထပ်ပြောရအုန်းမယ်၊ ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး တင်အေးက - “၂၀၁၅ အတွက် ဘတ်ဂျက် နည်းတယ်”၊ “၂၀၁၀ ခုနှစ်က (၆၅)ဦးဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး၊” “ဝန်ထမ်း ၂၀ဝ ကျော် ထပ်ခေါ်မယ်၊ အားလုံး ၁၄၀ဝ လောက် ဖြစ်သွားမယ်၊ ဝန်ထမ်း နည်း သောကြောင့် အခြားဌာနများသို့ အကူအညီ တောင်းလုပ်နေရပြီး အမှားအယွင်းဖြစ်ပါက ပါတီ အပြော အဆိုခံရသည်၊” “ဒု ဦးစီးမှူးအား ကော်မရှင်က တိုက်ရိုက် ခန့်အပ်မရခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနများကလည်း ပေးခွင့် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အပြင်မှ ခေါ်ယူရန် သတင်းစာများတွင် ကြေညာထားကြောင်း၊” “ဝန်ထမ်း မလောက်၍ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပိုလျှံ ဝန်ထမ်းများအား ခေါ်ယူခဲ့ရာ တပ်မတော်မှ အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အများဆုံးမှာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားထားတာ တွေ့ရတယ်၊ (မဇ္ဈိမ၊ ၁၄-၈-၂၀၁၅)။
အထက်ပါ လူလိမ်ကြီးပြောတဲ့ စကားကို ကြည့်ရင် ရှေ့နောက်ညီတာ တခုမှ မရှိဘူး၊ ယုံတမ်း စကားဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ သူ့စကားတွေဟာ ထင်သာ မြင်သာ မရှိသလို ဘာအထောက်အထားမှလည်း မပါဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် သူ့စကားကို မယုံကြည်ကြတာပဲ။ ဥပမာ - “၂၀၁၅ အတွက် ဘတ်ဂျက် နည်းတယ် ပြောတယ်၊ ဝန်ထမ်း ၂၀ဝ ကျော် ထပ်ခန့်မယ်လည်း ပြောပြန်တာတို့၊ ဝန်ထမ်း မလောက်လို့ အပြင်မှ ခေါ်ယူဖို့ သတင်းစားများက ကြေညာတယ် ပြောတာတို့ ဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ရ၊ ဘွဲ့လွန်တွေအပြင် ပါရဂူဘွဲ့ရ လူငယ်လူလတ်တွေ တပုံကြီး ရှိနေရက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ သူတို့ကို မခန့်ဘဲ စစ်တပ်ကနဲ့ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့က ပိုလျှံ ဝန်ထမ်း တွေကို ခေါ်ယူရတာလဲ၊ သံသယ ဖြစ်စရာပါ။ ခုဆို အလုပ်လက်မဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ ခေတ်ပညာ တတ်တွေဟာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ ကလေးထိန်း၊ အိမ်စေ အိမ်ကျွန်လုပ်ဖို့ အလုအယက် လျောက်နေ တာ ရင်နာစရာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို ကြည့်ပြီး သမ္မတဟာ ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ဥပေက္ခာပြုပြီး လက် တဆုပ်စာ သူ့စစ်အုပ်စုအကျိုးကိုသာ လုပ်နေတော့ သူနဲ့သူ့စစ်အုပ်စုဟာ “ဘယ်သူ သေသေ ငတေ မာရင် ပြီးရော” လုပ်နေတဲ့အတွက် သမ္မတနဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ လူသားချင်း စာနာစိ်တ်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယ ဖြစ်မိတယ်။ မပြောမဖြစ်လို့ ပြောရအုန်းမယ်၊ ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ညစ်တဲ့ ဥက္ကဋ္ဌကြီး တင်အေး ကိုယ်တိုင် ပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ -
(၁) “၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက ဘတ်ဂျက်ငွေ ကျပ်(၁၀)ဘီလီယံ ရတယ်၊ ၂၀၁၅ မှာ ကျပ်(၄၀) ဘီလီယံ ရတယ် ပြောတော့ ကျပ်(၃၀)ဘီလီယံ ပိုရနေတာတောင်မှ ဘတ်ဂျက် မလောက်ကြောင်း?”
(၂) “၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက (၅၆)ဦးဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ မှာ (ရှိပြီးသား) ဝန်ထမ်း နည်းလို့ ဆိုပြီး (၂၀ဝ) ထပ်ခေါ်အုန်းမယ်၊ အင်အား (၁၄၀ဝ) ဖြစ်လာမယ်၊ ဝန်ထမ်းနည်း သောကြောင့် အခြားဌာနများသို့ အကူအညီတောင်း လုပ်နေရပြီး အမှားအယွင်း ဖြစ်ပါက ပါတီ အပြောအဆိုခံရကြောင်း၊”
(၃) ဒုတိယ ဦးစီးမှူးအား ကော်မရှင်က တိုက်ရိုက် ခန့်အပ် မရခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနများက လည်း ပေးခွင့် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အပြင်မှ ခေါ်ယူရန် သတင်းစာများတွင် ကြေညာ ထားကြောင်း၊”
(၄) “ဝန်ထမ်း မလောက်၍ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ပိုလျှံဝန်ထမ်းများအား ခေါ်ယူခဲ့ရာ တပ်မတော်မှ အများဆုံးဖြစ်ပြီး ဒုတိယ အများဆုံးမှာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဖြစ်ကြောင်း” ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ (မဇ္ဈိမ၊ ၁၄-၈-၂၀၁၅)။
လူလိမ်ကြီး တင်အေး ပြောတဲ့စကားတွေဟာ ရှေ့နောက် မညီသလို ရိုးသားမှုလည်း လုံးဝ မရှိဘူး၊ ဥပမာ ပြောရရင် - (၁) ၂၀၁၅ ခုမှ ဘတ်ဂျက်ငွေ ကျပ်(၃၀)ဘီလီယံ ပိုရတာတောင် မလောက်ဘူး ပြောတယ်၊
(၂) ၂၀၁၅ မှ ဝန်ထမ်း (၁၃၀ဝ) ကျော်လောက် ပိုခန့်တာတောင် လူအင်အား နည်းတယ် ပြောတယ်၊
(၃) ဝန်ထမ်းနည်းလို့ သတင်းစာကနေ ကြေညာပြီး ခေါ်တယ် ပြောပြီး စစ်တပ်က အများ ဆုံး၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
က ဒုတိယအများဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ တကယ် ပြောရ ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ်လက်မဲ့ (သို့မဟုတ်) ကျပန်းအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ရ၊ ဘွဲ့လွန်တွေအပြင် ပါရဂူဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေ တပုံကြီး ရှိတယ်၊ ရွေး
ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဒီပညာတတ်တွေကို မခန့်ဘဲ ခေါက်ရိုး ကြိုး၊ အကျင့်ဗီဇတူ သူခိုးသူဝှက် စစ်အုပ်စုဝင်တွ
ေကိုပဲ ရွေးခေါ်ပြီး အရာရှိ အရာခံအဖြစ် အပ်တာ တွေကို ကြည့်ရင် သူတို့ စစ်အုပ်စုဟာ အရေးသုံးပါး (ရာထူးအာဏာ တည်မြဲခိုင်ခန့်ရေး၊ ချမ်းသာ ကြွယ် ဝရေး၊ အာဏာရ ကြံ့ဖွံ့ပါတီအနိုင်ရရှိရေးအတွက်ပဲ ဦးစားပေး လုပ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်။
ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ရ၊ ဘွဲ့လွန်များရဲ့ ဝမ်းနည်းစရာဘဝများ။
အထက်ဖော်ပြပါ ပညာတတ်များဟာ အမိနိုင်ငံမှာ အလုပ်ရှားလို့ တခြားနိုင်ငံသွားပြီး ပင်ပင် ပမ်းပမ်း၊ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ လုပ်နေကြရတယ်၊ တချို့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိတဲ့ အတ္တသမား လူပွဲစား တွေက ဘယ်မှာ ဘာအလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်တာ ဟိုလဲ ရောက်ကော ကျွန်သပေါက်အဖြစ် နှစ်ရှည်လများ လုပ်နေကြရတယ်။ အလားတူ အမျိုးသမီးတွေလည်း နိုင်ငံခြား အိမ်စေ၊ အိမ်ကျွန်၊ ကလေးထိန်း၊ ဇနီးမယားအဖြစ် အောက်တန်းကျကျ လုပ်နေကြရရှာတယ်။ တချို့ဆို အပျော်စံ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ အမိနိုင်ငံမှာ သယံဇာတ ပေါများ ကြွယ်ဝပါလျက်နဲ့ သူများ နိုင်ငံမှာ ကျွန်သပေါက်အဖြစ်၊ အိမ်ကျွန်အဖြစ်၊ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် လုပ်နေကြရတာ သိလို့ စိတ် မကောင်း ဖြစ်မိ၊ ရင်နာမိတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရတာဟာ သမ္မတလို အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား မကောင်းလို့ ဒီလို ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူငြင်းမလဲ။
အထက်ဖော်ပြပါ ဖြစ်ရပ်တွေအရ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားနဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းဟာ ရာထူး အာဏာ ခိုင်မြဲပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ တခါမှ မခံစားရဘူးတဲ့ စည်းစိမ်တွေနဲ့ ယစ်မူးနေချိန်မှာ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုတွေဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခဒဏ် အမျိုးမျိုးကို သေလုမျောပါး ခံစားနေကြရတာကို ကြည့်ပြီး အားမနာတမ်း ပြောရရင် သမ္မတ အပါအဝင် အုပ်ချုပ်သူ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေနဲ့ သူတို့အသိုင်း အဝိုင်းဟာ “လူသားချင်း စာနာစိတ် ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူသားတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လား”လို့ သံသယ ဖြစ်မိပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင် ထင်မြင်ချက်များ။
(၁) မဲဆန္ဒရှင်တွေက NLD ပါတီနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် အကြည်ညို ပျက် အောင် အစိုးရ၊ စစ်တပ်တို့နဲ့ ဆက်စပ်အဖွဲပတွေက သွားပုပ်လေလွင် လွှင့်ကြလိမ့် မယ်။
(၂) အစိုးရ၊ စစ်တပ်တို့နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အဖွဲ့တွေက NLD ပါတီ မဲဆွယ် တရားဟောပြော ပွဲတွေ ပျက်အောင် (သို့) ကစင့်ကလျား ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိမ့်မယ်။
(၃) ဆန္ဒမဲတွေကို ဒေသအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မတီနဲ့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီတို့က နည်းမျိုးစုံနဲ့ မဲမသမာမှု လုပ်ရာမှာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် “ရွေးကောက်ပွဲ ခြေရာခံအဖွဲ့” ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲမသမာမှုပေါင်း (၄၅၀)ထက် ပိုများလိမ့်မယ်။
(၄) ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရှုံးချေရှိမယ့် နယ်မြေကို အကြောင်းတခုခုပြပြီး ဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်။
(၅) တနိုင်ငံလုံး ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရှုံးခြေရှိတဲ့အခါ အစိုးရ၊ စစ်တပ်တို့နဲ့ ဆက်စပ်အဖွဲ့တွေက ရွေး ကောက်ပွဲ ပျက်အောင် ဆူပူမှု ဖန်တီးလိမ့်မယ်။
(၆) ဒီဆူပူမှုကို အကြောင်းပြပြီး အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိမ့်မယ်၊
(၇) ယင်းဆူပူမှုကို အကြောင်းပြပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိမ့်မယ်၊
(၈) ဒီကြားကာလအတွင်းမှာ အစိုးရနဲ့ မဘသတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မနာလို ဝန်တို ဖြစ်ခါ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို ရန်ပြုလိမ့်မယ်၊ ရန်ပြုလို့ မအောင်မြင်တဲ့အခါ ၂၀ဝ၃-မေလတုန်းကလို လိမ်ညာကာ ကြေညာလိမ့်မယ်၊
(၉) ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ပါတီချင်း ပြဿနာဖြစ်အောင် ခြေထိုး၊ ရန်တိုက်ပေးလိမ့်မယ်၊ -----------------------------------------------------------------------
(၁၀) NLD ပါတီက အနိုင်ရတဲ့အခါ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ညှိကာ အကြောင်းတခုခုပြပြီး ၁၉၉၀-ခုနှစ်ကလို အာဏာမလွှဲဘဲ ဆက်ထိန်းထားလိမ့်မယ်။
(အပိုင်း-၃)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်။